Madaafiic ay is dhaafsadeen ciidamada Puntland & Somaliland oo khasaare ka dhashay, Dhaawac la geeyey Laascaanod – Puntlandtimes
Madaafiic ay is dhaafsadeen ciidamada Puntland & Somaliland oo khasaare ka dhashay, Dhaawac la geeyey Laascaanod
LAASCAANOOD(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in madaafiic culus oo ay galabtay is dhaafsadeen ciidamada Puntland & Somaliland uu ka dhashay khasaare gaaray ciidamada maamulka Hargeysa, waxaana la xaqiijiyey dhaawaca 7 askari oo katirsanaa ciidamada maamulkaas.
Goobjoogayaal kusugan deegaanka Gooja-Cade ayaa sheegay in madaafiicdan ay ku dhaceen goob ay ku sugnaayen saraakiil ciidan, waxaana ka dhashay khasaarahaas oo ilaa hadda la xaqiijiyey in ay ku jiraan 3 sarkaal oo katirsanaa taliska ciidamada maamulka Somaliland.
Ma jirto cid katirsan dhinacyada oo ilaa hadda ka hadashay, balse labadii maalmood ee ugu dambeysay ayey hoos u dhacday madaafiicda ay ridayeen dhinacyadan, waxaana galabtay halmar la maqlay hubka culus oo ka dhacay jiidahaas.
Dhaqdhaqaaqyada ciidan ayaa socda, waxaana muuqatay in galabnimadii maanta ay ka duwaneyd xiliyadii hore, waxaana dhinaca Somaliland ay hubkoodii cuslaa mar hore geeyeen deegaanka Gambara, cabsi ka qabaan in lagu qabsado Tukaraq.
Madaafiicda goobta ama DABKa culus ee ay adeegsanayaan labada dhinac ayaa si toos ah looga maqlayaa deegaanada ka durugsan aaga lagu dagaalamayo, sidda ay sheegayaan dadka miyiga ku nool, waxaana ay sheegen in ay xili kasta maqlaan xabadaha waa weyn.
Lama sheegin wax khasaare ah oo dhinaca Puntland kasoo gaaray madaafiicda tuuryada ah ee galabtay dhacday, waxaana ilaa hadda la rumeysan yahay in ay Puntland u muuqdaan kuwa guul wanaagsan ka gaari kara dagaal dhaca.